Amashishini kunye namatyala / isicelo
Ukutya kunye noTywala
Ioyile kunye neGesi / iMigodi
Ikhemesti / isichumisi
Inkqubo yokuPholisa / ukuCoca umoya
Umnqamlezo oPhambukayo uQinisekiso lwe-Evaporative-uthotho lwe-SPL-S
Ikhawuntari yokuHamba kwaManzi aPhambukayo- SPL-N Series
Isakhelo esivaliweyo sokupholisa inqaba
I-Closed Loop Cooling tower-Umnqamlezo
Indawo evaliweyo yokupholisa iluphu-yokuPhuma kokuBala
I-Steel Open Loop yokupholisa iNqaba
D1, D2 Isitya soxinzelelo
Ukugcinwa kweTrmal Thermal
Iqela lethu kunye neNkcubeko
Inkonzo kunye neNkxaso
Ii-FAQ / ukhuphelo
Ifom yoQhakamshelwano / yoPhando
I-Evaporative Condenser-Counter Flow
I-Evaporative Condenser-Ukuhamba koMnqamlezo
Itekhnoloji yokuPholisa ifriji ePhambili ye-Ammonia inceda ukonga ukusetyenziswa kwamandla kunye naManzi ngaphezulu kwama-30%. Ukupholisa ngomphunga kuthetha ukubaIINTSHONA ZOKUGQIBELA ZOKUGQIBELA inokufunyanwa. Ubushushu obuSebenzayo kunye nobokugqibela obuvela kwisikhenkcisi buthatyathwa nguManzi oFafayo kunye noMoya oNgenisiweyo phezu kwekhoyili.
Ukuphola okulandelayo kwesizukulwane kubonelela ngezibonelelo zokuPholisa ngomphunga kunye nokomisa kumatshini omnye. Ubushushu obuShukumayo obuvela kulwelo oluphezulu lobushushu bunokutsalwa kwicandelo elomileyo kwaye Ubushushu obufihlakeleyo bunokutsalwa kwiCandelo leManzi elingezantsi, okukhokelela ekusebenzeni ngokuGqwesileyo nokuGcina amandla.
I-Cooler eyomileyo ekwabizwa ngokuba yi-Liquid Cooler ilungele ngokufanelekileyo apho kukho ukunqongophala kwamanzi okanye amanzi ayimpahla yorhwebo.
Akukho manzi athetha ukususwa kweentsalela zekalika ezinokubakho kwiikhoyili, ukusetyenziswa kwamanzi zero, ukukhutshwa kwengxolo esezantsi. Iyafumaneka kokubini uyilo olwenziweyo kunye noyilo olunyanzelisiweyo.
IVALIWE NGOKUPHOLAYO KWI-LOOP
Yonga ngaphezulu kwama-30% amanzi kunye neNdleko yokuSebenza ngenkqubo yayo yokuphola evaliweyo yomgangatho ophezulu kunye nokusebenza ngokufanelekileyo. Ifaka indawo yokutshintsha ubushushu obuqhelekileyo, impompo yesibini, imibhobho kunye nohlobo oluvulekileyo lokupholisa inqaba kwiYunithi enye. Oku kunceda ekugcineni iNkqubo icocekile kwaye igcinwe simahla.
UKUGCINWA KWE-ICE THERMAL
Ukugcinwa kwamandla e-Ice Thermal (TES) yitekhnoloji egcina amandla ashushu ngokupholisa indawo yokugcina ukuze amandla agciniweyo asetyenziswe ngexesha elizayo kwizicelo zokupholisa.
Inkqubo yeFriji yefriji ene-condenser evaporative
INKQUBO YOKUGQIBELA KWI-AIO KUNESIQINISEKISO SE-EVAPORATIVE
I-Skid ekhwele igcwalisiwe Inkqubo yeFriji efakelweyo kunye ne-evaporative Condenser inceda uMthengi agcine indawo, amandla kunye nokusetyenziswa kwaManzi ngaphezulu kwe-30%. Intlawulo ephantsi yeAmonia Ifriji Inkqubo enoxanduva lwenqaku elinye, iyanceda. Ubushushu obuSebenzayo kunye nobokugqibela obuvela kwisikhenkcisi buthatyathwa nguManzi oFafayo kunye noMoya oNgenisiweyo phezu kwekhoyili
Ifriji yeeNqanawa zeAuxillary
Iinqanawa ze-SPL zefriji ziyilelwe kwaye zenziwa ngokwe-ASME Sec VIII Div. 1. Iinqanawa ezinesitampu zeASME ziqinisekisa ukuthembeka okupheleleyo kunye nozinzo kwisityalo seFriji. Ayiphuculi kuphela ukuSebenza kweMandla kwenkqubo, kodwa iyanciphisa iindleko zokusebenza.
Uhlobo oluvulekileyo lwensimbi yokupholisa iNqaba-ukuPhuma koMnqamlezo
INDLELA YOKUVULA ITYPE YENTSIMBI YOKUPHOLISA
Uhlobo oluhamba phambili oluhamba phambili oluVulekileyo lohlobo oluVulekileyo lusindisa ngaphezulu kwama-30% amanzi kunye neNdleko yokuSebenza ngokuchasene nohlobo lokuhamba oluVulekileyo. Ukusebenza okuphezulu Ukuhanjiswa kobushushu kugcwalisa kunye nokushenxisa abakhuseli kubonelela ngokuSebenza okuQinisekisiweyo ngokuShushu kweThermal. Ubume beCompact kwaye kulula ukuyifaka kumatshini weNsimbi kukwakhusela okusingqongileyo kwimicimbi ye-FRP.
Itekhnoloji yokuPholisa ifriji ePhambili ye-Ammonia inceda ukonga ukusetyenziswa kwamandla kunye naManzi ngaphezulu kwama-30%. Ukupholisa ngomphunga kuthetha ukuba AMANQANABA WOKUGQIBELA OPHANTSI anokufumaneka. Ubushushu obuSebenzayo kunye nobokugqibela obuvela kwisikhenkcisi buthatyathwa nguManzi oFafayo kunye noMoya oNgenisiweyo phezu kwekhoyili.
Idilesi: Hayi. 458 Gongye Road Baoshan District Shanghai, 200444, China
Umnxeba: Sitsalele umnxeba ngoku: + 86-21-36160669
Kutheni ugcino lomkhenkce?
Kutheni ugcino lomkhenkce? Inkqubo yoGcino lweqhwa isebenzisa umkhenkce ukugcina amandla ashushu. Ebusuku, inkqubo ivelisa umkhenkce ukugcina ukupholisa, kwaye emini bakhupha ukupholisa ukuhlangabezana neemfuno zombane eziphezulu. Umkhenkce ...
Iingcebiso ezincinci kwii-SPL evaporative Condensers
Sukwenza nayiphi na inkonzo okanye kufutshane nabalandeli, iinjini, okanye ukuqhuba okanye ngaphakathi kweyunithi ngaphandle kokuqala uqinisekise ukuba abalandeli neempompo zinqanyuliwe, zitshixelwe ngaphandle, kwaye ziphawuliwe. Khangela ukuqinisekisa iibheringi motor fan ...
Imveliso yesiqandisi iya kujongana neNguquko
U-Gao Jin, uMlawuli-Jikelele weSebe loTshintsho lweMozulu, uthe okwangoku i-China i-carbon carbon intensity ibopha ikakhulu ikharbon diokside. Inyathelo elilandelayo kukuqinisa ulawulo kwii-HFCs, kwaye ngokuthe ngcembe ...
I-condenser evaporative iphuculwe ukusuka kwinqaba yokupholisa. Umgaqo wokusebenza kwawo ngokusisiseko uyafana nalowo wenqaba yokupholisa. Oku ikakhulu iqulunqwe umzimba sokufudumeza, inkqubo ukujikeleza kwamanzi kunye fan syste ...
Joyina Izandla Zokulwa Ubhubhane
Ngo-Matshi 4, 2020, inqwelomoya evela eBrazil yafika ngokukhuselekileyo eShanghai, ithwele iimaski ezingama-20 000 zeFF2 ezinikelwe yiLianhe Chemical Technology Co, Ltd., KwiTaizhou Red Cross. Le yibhetshi yesihlanu ...